Barcelona Oo 65 Milyan Yuro Oo Lagu Daray Xiddig Weyn Oo Khadka Dhexe Ah Ku Dooneysa Marco Verratti – WWW.Gool24.net
[ September 21, 2017 ] RASMI: Atletico Madrid Iyo Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Ay Heshiis Ka Gaadheen Iibka Diego Costa	La Liga
Barcelona Oo 65 Milyan Yuro Oo Lagu Daray Xiddig Weyn Oo Khadka Dhexe Ah Ku Dooneysa Marco Verratti
July 16, 2017 Saed Balaleti
Kooxda Barcelona ayaa muddo dheer xiiseyneysay xiddiga khadka dhexe ee Paris Saint-Germain Marco Verratti iyadoo wararka ay sheegayeen inuu xiddiga Talyaaniga heshiis shaqsi ah la sii gaaray kooxda ka dhisan horyaalka La Liga.
Wakiilka ciyaaryahanka ayaa ku cadaadinayay inay Paris Saint-Germain iska iibiso Marco Verratti laakiin milkiilaha kooxda Nasser Al-Khelaifi ayaan dooneynin inuu dhageysto dalab kasta oo u yimaada xiddigii hore ee Pescara.
Sida ay baahisay Calcio Mercato Barcelona ayaa qorsheyneysa inay dalab aan la diidi karin ka gudbiso Verratti, waxaana wariyahooda Angelo Taglieri uu xusay in Barcelona ay u bandhigtay PSG 65 milyan yuro oo kaash ah oo uu la socdo ciyaaryahanka khadka dhexe Ivan Rakitic, waxaana ay haatan sugayaan jawaabta PSG.
Kooxda Faraniiska ayaan dooneynin inay ciyaaryahankeeda ugu qiimaha badan iska iibiso, iyadoo Verratti dhawaan beeniyay inuu doonayo inuu ka tago kooxda Faransiiska.
“Waan arkay wixii uu wakiilkeyga yiri, waxaana doonayaa inaan sheego inaysan hadaladeyda aheyn. Waxaan doonayaa raaligeliyo qof walba oo kooxda jooga, madaxweynaha, taageerayaasha iyo ciyaartoyda. Ciyaaryahanka aan maanta ahay waxaan ku noqday kooxdaan, waana sababta aan aad uga xumahay arinkaan” ayuu Verratti yiri maalmo ka hor.
Si kastaba, Barcelona ayaa weli dooneysa ciyaaryahanka, waxaana sida cad uu Verratti u furan yahay inuu u dhaqaaqo Camp Nou inkastoo uusan taasi ka hor qiraneynin warbaahinta.
Waxaa haatan la sugayaa waxa ka soo bixi doona dalabka ugu danbeeyay ee ay Barcelona ka gudbisay ciyaaryahanka iyo jawaabta ay ka bixin doonto kooxda heysata lacagta dalka Qatar ee PSG.